Shillinka 50ka santi oo isticmaalkiisa la joojinayo | Somaliska
Shaqada & Ganacsiga
Shillinka ugu yar lacagta karoonka ee loo yaqaano 50 ore ayaa isticmaalkeeda lajoojin doonaa wixii ka dambeeya bishaan September dhamaadkeeda. Lacagta Sweden ee karoon ayaa waxaa ugu yaraan doona 1 karoon. Qofkii haysta lacagta 50 santiga ayaan awood u heli doonin in uu wax ku gato ka dib September. Bangiga dhexe ee Sweden ayaa go;aan ku gaaray in uu joojiyo isticmaalka lacagta yar ka dib markii afti laga qaaday dadka Swedishka ay 2 meelood 3 ay sheegay in lacagtaan ay tahay macno daro.
Shillinka 50ka santi oo isticmaalkiisa la joojinayo
Shillinka ugu yar lacagta karoonka ee loo yaqaano 50 ore ayaa isticmaalkeeda lajoojin doonaa wixii ka dambeeya bishaan September dhamaadkeeda. Lacagta Sweden ee karoon ayaa waxaa ugu yaraan doona 1 karoon.
Qofkii haysta lacagta 50 santiga ayaan awood u heli doonin in uu wax ku gato ka dib September.
Bangiga dhexe ee Sweden ayaa go;aan ku gaaray in uu joojiyo isticmaalka lacagta yar ka dib markii afti laga qaaday dadka Swedishka ay 2 meelood 3 ay sheegay in lacagtaan ay tahay macno daro.
Asc ku soo dhawaada Somaliska.com. Waxaan rajaynayaa in aad ka faa’idaysateen mowduucaan isla markaana aad fikrado qiimo leh ku darsan doontaan. Xumaan, qabyaalad, aflagaado iyo arimaha siyaasada Somaliya waa ka manuuc halkaan. Fadlan aan iscaawino oo su’aalaha qofkii jawabaha haya dadka ha u faa’ideeyo. MAHADSANIDIIN!
Akhriso mowduucyo kale oo xiiso leh...
Maxkmada ugu saraysa Sweden oo diiday nikaaxa Muslimiinta
16 Mar, 2012
Soomaalida Göteborg sidee u arkaan meleteri la geeyo xaafadaha ajaanibta?
Nin khaat lagu qabtay oo 8 bilood lagu xukumay [Video]
MOWDUUCYADA XIISAHA LEH
Magaaladda Stockholm: Xaafadda Rinkeby oo goor dhow lugu dilay wiil soomaali ah
Isbitaalka degmadda Udevala oo tarjumaaano soomaalida ka mid tahay shaqaaleeysiiyey
Wasiiradda dhaqaalaha Iswiidhan: “Is dhex-galku siddii loogu talagalay uma socdo”
“Haddii goob uu shil ka dhacay aad sawir ka qaado ogow xabsi baa mudan kartaayee!”
Xaafadda Rinkeby oo shir deg deg ah ka dhacay ka dib dilkii loo geeystay wiil soomaali ah
Dilalka cunsuriyiinta dartood Sweden ma uga guuraysaa?